Paweł Czechowski, Qoraaga SmartMe
Naag caqli badan
Posts by Paweł Czechowski
Dom » Maqaallada Waxaa daabacay Paweł Czechowski
Waxay noqon doontaa duufaan, marka TikTok ayaa kaa caawin doonta inaad shaqo hesho
Waxa daabacay	Paweł Czechowski
e-sport, praca, warbaahinta bulshada, tiktok
Faallo ka tag
Kto próbował kiedykolwiek szukać pracy, ten wie, że kwestia pisania CV, listu motywacyjnego i późniejsze rozsyłanie tej wspaniałej dokumentacji bywa orką na ugorze, nawet jeśli mamy za sobą dużo solidnego doświadczenia. Z pomocą ma...
Kacaan xasilloon. Soddon sano oo internetka ah oo beddelay xiriirkeenna
allaro, internet, gudbiyaha, warbaahinta bulshada, farsamada, tilmaan
Waqtigaas oo internetka internetka uu wali ku yaalo wadankeena bilowgiisii, hooyaday - oo dooneysa inay daryeesho waxbarashadeyda sida ugu macquulsan - waxay aruurineysay "Worlds of Knowledge" iyo "Great Polonica Encyclopedias". Intii lagu gudajiray ...
Nabadeey Michael! Qoraal kooban oo ku saabsan xaqiiqda ah inay sidoo kale mudan tahay in la noqdo "kan saddexaad" inta lagu jiro tartanka
meel, Michael Collins, USA, tartanka booska, USSR
Sida la soo sheegay, Hitchcock mar wuxuu yiri filimku waa inuu ku bilaabmaa dhulgariir, ka dibna xiisaddu waa inay sii socotaa. Qoraallada waa in ay u badan tahay in ay ku shaqeeyaan mabda 'lamid ah, sidaa darteed waxaan ku bilaabi doonaa midkan fikrad geesinimo leh: xitaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka ...
Maxaan u fiirsanaa xiddigaha halkii aan ka ahaan lahayn kalluunka? Ku saabsan sahminta badaha
sahamin, mustaqbalka, badaha badda, safarka, farsamada
Hal-ku-dhigyada ugu taabashada badan ee aan ku akhriyey xusuusta murugada internetka ayaa ah "Way kugu daahay in aad soo ogaato qaaradaha cusub, laakiin waa goor hore in aad ogaato meerayaasha cusub." Weedhan soo jiidashada leh waxay la xiriirtaa ...
Ciyaar oo u oggolow kuwa kale inay ciyaaraan. Ku saabsan sida aan loo jeexin "kazuali" iyo "hardcore"
gry, ciyaaraha kombiyuutarka, awood urursi, xawaare
Bulshada dhexdeeda, way ka fududdahay in wax la wadaago marka la isku daro - waxaan ku aragnaa dalkeenna iyo dibaddiisaba. Muhiimadda muranku ma aha inay ahaato qiyam sare, sharaf qoys iyo wixii la mid ah ...
Jidka ku dhufo, (autonomus) baabuur. Baabuurtu goorma ayey is wadi doonaan?
magaalooyinka, baabuurta, gawaarida, farsamada
Celcelis ahaan, bishiiba mar hoostiisa daaqaddayda, halkaas oo ay ku taal waddo aad u mashquul badan, waxaa jira shil halis ah ama shil aad u khatar badan oo muuqaal u eg. Tan iyo fasaxa, laba darawal ayaa midba midka kale cunaha ka saaran yahay. Maxaa dhacaya haddii ...
Ukunta wanaagsan! Taasi waa, oo ku saabsan ugxanta dabiiciga ah ee ciyaaraha
xiisaha, ukunta busta, gry, ciyaaraha kombiyuutarka, Ciidda
Maxaan u ciyaarnaa? Jawaabtu waa iska cadahay - baashaal, waa nooc madadaalo ka dib oo dhan. Si madadaaladaani uga dhigto mid raaxo leh, abuurayaashu waxay inta badan ku dhex tuuraan ukuntooda ukun-baxayaasha iyo waxyaalaha kale ee ay soo ururiyaan. Oo sidaas daraaddeed waxaan u soo ururiyaan ...
Waxaan dhamaanteen noqon doonaa naadir marka mashiinadu noo yimaadaan
28 Maarso 2021
algorithm, Waxqabadka CD-ga, warbaahinta, warbaahin cusub, praca
Muddo shan sano ah ayaan baranayay suxufiga, waxayna u wada ekaatay sida dhiiga ciida - maxaa yeelay waxaa la sheegaa in kumbuyuutaro ku dhuumanayaan meesheyda. Maaddaama algorithm uu durbadiiba awood u leeyahay inuu diyaariyo qoraal fudud ...
Kala fog midba midka kale. Sidee ayuu aafadu u badali doontaa shaqadeena iyo waxbarashadeena?
25 Maarso 2021
Covid, internet, waxbarasho fog, faafa, shaqo fog
Qolka kala soocida ayaa madhan, qufulkii waa la siidaayay - iyo, jug, isbeddelo cusub oo isdaba joog ah ayaa dhacaya. Xaaladda xilligii masiibada ayaa asal ahaan is beddeleysa usbuuc ilaa usbuuc mana noqon karno ...
Xisaabaadka dhintay sidaan nahay. Maxaa hadhay kumbuyuutarradeena markaan tagno?
Filimyada xiisaha leh ee Mareykanka, waxaan mararka qaarkood ku arki karnaa nin xarrago leh oo 50 jir ah oo timo cirro leh iyo saacad dahab ah oo gacantiisa ku jirta, oo u taga nootaayo lagu oggolaado doonistiisa, ka dibna si cajiib ah ugu dhinta horumarka ...
SmartMe waa meesha kuugu fiican adduunka Smart. Xariir teknolojiyad ah oo daabacaya wararkii ugu dambeeyay, dib u eegisyo, hagitaanno iyo sadarado ka socda aagagga xallinta caqli-galka. Shirkad naqshadeysa xalalka Smart ee guryaha, guryaha, hoteelada, isbitaalada iyo waxyaabo kaloo badan. Xogta ugu weyn ee wax soosaarka Smart ee Poland. Dhiirrigeliyaha qaab nololeedka smart!
Waqtiga ku sug
Meizu Watch ayaa si dhakhso leh u soo socota
Alio PTZ10xFHD - kamarad cusub oo loogu talagalay qolalka shirarka waaweyn
Oclean X Pro vs Oclean X Pro Elite - Waxaan isbarbar dhigayaa cadayga Sonic ee ugu sarreeya!
Aqara Hub oo ka socota Xiaomi Mi Home
Kaaliyaha Guri Google - astaamo cusub
Kaaliyaha Hoyga ee Xiaomi
Kaaliyaha guriga - ku darista Qaybta Macaamiisha
Xiaomi Home App - isbedelka gobolka
Xalka Smart Home ee qof walba
© 2021 SmartMe. Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya
U rog dhinaca kore
Kaliya hal guji baad tahay inaad soo gasho dunida SMART
Isdiiwaangelinta warsidaha oo sahamiso tikniyoolajiyadda casriga ah iyo aaladaha maalin kasta si noloshaada loo fududaado!
Waan akhriyay oo aqbalay jumlada macluumaadka
Muhiim: waxaan isticmaalnaa buskud Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka keydsan anagoo adeegsaneyna cookies iyo teknolojiyad la mid ah, oo ay ku jiraan loogu talagalay xayeysiinta iyo ujeedooyinka tirakoobka iyo in la waafajiyo adeegyadeena baahiyaha shaqsiyadeed ee adeegsadayaasha. Xayeysiiyayaasha, shirkadaha cilmi-baarista iyo bixiyeyaasha codsiyo badan ayaa iyaguna isticmaali kara. Barnaamijka loo adeegsado in lagu shaqeeyo internetka waxaad ka badali kartaa jaangooyooyinka buskudka. Adeegsiga websaydhada iyadoon la beddeleynin meeleeyaha loogu talagalay kaameerada waxay ka dhigan tahay in lagu keydin doono xusuusta aaladda.